Happy Birthday MZ — MYSTERY ZILLION
Happy Birthday MZ
April 2009 edited April 2009 in MZ News
ဒီနေ့မှာ MZ ၂ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ member အားလုံးရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ အတူ MZ admin , moderator များ ကြိုးစားပေးခဲ့မှုကြောင့် MZ အသက် ၂ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီဗျာ...:6:
PS: MZ ပွဲမလုပ်ဖြစ်တော့ပါ... Sponsor ပေးမည်ဆိုပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မပေးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပွဲမလုပ်ဖြစ်တော့ဟုသိရပါသောကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်။ ဘာမှစိတ်ထိခိုက်မနေနဲ့ ကိုစေတန်။ ဒီနှစ်မလုပ်ဖြစ်တော့ နောက်နှစ်ပေါ့ဗျာ။ အားလုံး၀ိုင်းကြိုးစားကြမှာပေါ့။
April 2009 edited April 2009 Registered Users, Moderators
Mz ပွဲကြီးတကယ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ တော်တော်ဝမ်းနည်းရပါတယ်။ :2: တွေးပြီးပျော်နေတဲ့အပျော်လေးတွေတောင်ဘယ်ပျောက်သွားမှန်းမသိ...
ကိုစေတန်နောက်နေတာလား။ ဧပြီ ၁ ရက်ဆိုတော့ April Fools' Day လေ။
April 2009 edited April 2009 Administrators
Sponsor တကယ်မရတာပါဗျ... ကျွန်တော် mail ကို screenshoot တင်ပေးလိုက်မယ်။
Sorry ပါဗျာ။ ကိုစေတန်ရဲ့ post အောက်ဆုံးမှာ ဒါကြီး (Loof Lirpa) ကလည်းပါနေတော့ ဧပရယ်ဖူးလ်လုပ်တာလားလို့ ပြန်မေးကြည့်တာပါ။
ဒါကြီးကိုတော့ April Fool မလုပ်ပါနဲ့နော် ဆြာစေတန်...နောက်နေတာမလားဟင် နောက်နေတာလို့လုပ်လိုက်နော်
နှစ်ပတ်လည်ပွဲ မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး ဆိုတာသိရလို့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် mz ၂နှစ် ပြည့်ခဲပါပြီ။ :36::36::36:
ကိုစေတန်ရေ... ဘယ်သူတွေက စပွန်ဆာတွေဖျက်သွားကြတာလဲဟင်... ကြိုလုပ်ထားတာတွေအကုန်သွားပြီပေါ့....... ဟင်း.... ပွဲနေ့ကိုကြိုတွေးပြီးပျော်နေတာတောင် ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိတော့ဘူး.....:(( ( (
ဟမ် .. Dvd အခွေတွေရိုက်ထားတာ အလကားဖြစ်ကုန်ပြီလား။ ငါးရက်လောက်လိုမှ ကပ်ပြောရတယ်လို့။
Mz ပွဲနီးတဲ့ အချိန်မှ ကျတော်လဲအလုပ်ကြောင့် ခရီးထွက်သွားရလို့ အဝေးကနေရန်ကုန် ကအသံတွေ နားထောင်ပြီး ကြည်နူးတော့ မယ်လို့စိတ်ကူးထား တာခုလိုကြားရတော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်...
ဒီ ၂ နှစ်ပြည့်မှာ စပွန်စာတွေ ဂဂျောင် ဖြစ်သွားလို့ပျက်သွားပေမဲ့ နောက်နှစ် ၃ နှစ်ပြည့်အတွက် မန်ဘာတွေ ကပဲနည်းနည်းစီ ဒါနပြုပြီးစုကြတာပေါ့နော်..... ကျတော်လဲ ရန်ကုန်ပြည်ရောက် တဲ့အခါ တတ်နိုင်သလောက် ထည့်ဝင်ပါ့မယ်..... Mz ရည်ရှည်တည် တံ့ပါစေ...:77::77::77:
ဒီနေ့မှားသွားသော ခြေတစ်လှမ်းသည် နောက်တစ်နေ့အတွက် လမ်းစတစ်ခုဖြစ်သည် တဲ့.............
ဒီတစ်ခေါက်မလုပ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းတာတော့အမှန်ပဲ....... ဒါကို သင်ခန်းစာယူပြီးနောက်နှစ် ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်........ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အတွက် လစဉ် income လေးရှိသင့်ပြီထင်တယ်........ (ထင်တာနော်........) ဘယ်လို လုပ်သင့်တယ်ဆို တာတော့ အားလုံး၀ိုင်းဆွေးနွေးပေးကြပါ........... MZ နှစ်ပတ်လည်အတွက် အမှန် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်...........
ကိုစေတန်ရေ။ အပျက်တော့ မခံပါနဲ့ဗျာ။ Member တွေအားလုံး စုထဲ့ပြီးလုပ်ရအောင်။ ပိုက်ပိုက်က ဘယ်လောက်လိုလို့လဲ။ အားလုံးလဲ ကြော်ငြာပြီးသွားပြီလေဗျာ။ မလုပ်ဖြစ်ရင် လူရီစရာကြီး ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဗျ။ Please Please ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြစ်အောင်စီစဉ်ပါလားဗျာ။
ဟားဟား မင်မင်ကြီးက အေပရယ်ဖော် April fool လုပ်တာပါ။ မယုံရင် အရင်ဆုံးပို.စ်အောက်က အနီရောင်နဲ.ရေးတာနောက်ကနေဖတ်ကြည့်:39::D:5:
ဒါကြီးက အီးမေးမှ မဟုတ်တာ ..ချက်တင်းကဟာကို ပြထားတာ။ လိမ်ရင်လဲ သေသေချာချာ လိမ်မှပေါ့ကွယ်။
ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး မင်ဘာများ .. ဧပရယ်ဖူးဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက နောက်သွားတာပါ။ ယုံနဲ့။
လူဇိုး ...စေတန်ဂွတ် ဂယ်အောက့်မေ့လို့....:p:p:p
နောက်တယ် လူဇိူ..... ):)):p
:d:d:d တားကတော့ ဒီနေ့မှာ ဘူးဘာကျောကျောယုံဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပီးတား... တားကြောတာတွေလည်း ဘူးမှယုံကြနဲ့နော်..ဟိ... :p:p
it's not april fool
the plan for exhibition is reli gone:2:
coz it was confirmed in yesterday nite:2:
juz few members knows abt that
u men can ask to the admins such as saturngod, sithuaung and exiter:2:
အန်... တကယ်လား.. ဖူးလုပ်နေတာလား... အတည်ပြောကြပါဦးနော်...
ဒါဆိုမင်မင်ဆေးတံက ပိုစ့်အောက်မှာ အေပရယ်ဖူးကြီးထည့်ရေးထားတာလဲ :106:
အမှန်ကိုသိချင်ပါသည်။... ကို ဒီဘီပြောတော့တစ်မျိုး... :39: :77::77::77:
moemyintshein wrote: »
ko DBA dun know abt it yet and that's why he think that it would be april fool:2:
coz while negotiating with the sponsors, some probs occurs and that's why they cancelled the sponsors:2:
If you dun believe, u can make the phone call to saturn and sithu
Saturn God - 098022939
Si Thu - 098515235
free call to myanmar!!!!!!!!!!!!!!!!! ပါခင်ဗျာ.............ကြိုးစားကြည့်ကြပါကုန် ............အဆင်ပြေကြ
လားဆိုတာကိုလည်း အကြောင်းပြန်ကြအုံးနော် ။
kyawmin wrote: »
aah wy do we kidding on ya bro?:106:
If you dun believe, u can make the phone call to saturn and sithu and can ask abt it
MZ နှစ်ပတ်လည် မလုပ်ဖြစ်ဘူးလို ့ပြောသံလဲ ကြားရော ကျွန်တော်လေ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။:O:O:O:O ကိုစေတန်ရေ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့။နောင်နှစ်ကျရင် ယခုလက်ရှိစီစဉ်ထားတာထက် ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။:6::6::6::6:
Happy Brithday MZ
ယုံရမှာလား။ မယုံရဘူးလား။ ယုံရမှာလား။ မယုံရဘူးလား။ ယုံရမှာလား။ မယုံရဘူးလား။
အင်း....ကြည့်လုပ်ကြပါဦးဗျာ.. ဟိုလိုလိုဒီလိုလို တောင် ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေပြီ......:)):)):))
it's no wonder and she's always
according to her post
aah it's not April Fool
you can make phone call to saturn or sithu
and saturn inserted this msg coz if the sponsor is ok, this thread would be just the April Fool.
if the sponsor isn't ok, it would be real:2:
now, the condition is 75% to gone.
and saturn and sithu seeking for new sponsors
April 2009 edited April 2009 Moderators
it is real .. REALLY SORRY All Members...
We actually apologize to all memberss..
We also feel.. so sad..
ဘယ်ဟာကိုယုံရမှာလဲဟင်။ တကယ်ဆိုရင် သွားပါပြီ။ကျွန်တော်ကအားခဲထားတာ။ တကယ်ဆိုအကိုတို့လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်ဒီလောက်ဖြစ်နေရင် အကိုတို့လည်းဘယ်လိုနေမယ်ဆိုတာမြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
It is Just APRIL FOOL :P ( just kidding )
DON'T WORRY ALL MEMBERS..
Saturn can't surf to MZ due to very poor connection !
So, instad of Saturn.. , I accounced it..
MZ Anniversary will be April 5.
mgpyone wrote: »
ကောင်းလေစွကိုပြုံး။ Member တွေကို စိတ်ဆင်းရဲအောင် နောက်တဲ့ Admin ကြီး ကိုစေတန် လူဆိုး :D:D
ဒါနဲ့နေပါဦးဗျ။ ကိုပြုံးကလည်း နောက်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်၊ တော်ကြာ မင်မင်ကြီးကနောက်လိုက်၊ မော်မော်ကြီးကနောက်လိုက်နဲ့ ဧပရယ်ဖူးလ် ၂ ခါမိနေမှာစိုးလို့။:d
aah mg pyone....!
wy do ya announce bf 2nd april:106:
မနှစ်တုန်းက ကျွန်တော် မောင်စေတန် မိန်းမခိုးပြေးလို့ MZ ပွဲမလုပ်ဖြစ်ဘူးလို့ April Fool ကို ကိုပီဇီ လုပ်ဘူးတယ်။ ကျွန်တော်တောင် ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျ... ဒီနှစ်တော့ ကျွန်တော်ရယ် စည်သူ exiter မောင်ပြုံး info တို့ ၁၉ လမ်းမှာ ဆုံပြီး April Fool လေး MZ မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်လုပ်ရအောင်ဆိုပြီး လုပ်ဖြစ်သွားတာပါဗျာ။ အားလုံး ဆောရီးနော်...
sponsor တစ်ယောက်ကတော့ ပေးမယ်ဆိုပြီး တကယ်ပေးဘူးဗျ... အဲလူကြီးကို ကျေနပ်ဘူး... လိမ်တယ်.. ညာတယ်.. လူညာကြီး...
မလုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုလိုလို့ပွဲတက်ဖို့buy ထားတဲ့ air ticket ဆွဲဖြဲ လိုက်ပီ မနက်က(ပြန်ရော်ပေး (ဟီး~~~~~~~~)
မလုပ်ပါနဲ့တော့ ကို info ရေ.. ကျွန်တော်ပြောခိုင်းလိုက်တာ... Member တွေ MZ ကို တကယ်ချစ်တာဗျ... MZ member တွေ စိတ်မဆင်းရဲစေချင်တော့လို့ စောစောပြောလိုက်တာပါ..
Happy Birthday MZ.
မွေးနေ့မင်္ဂလာပါ mz ရေ... သားသားထက် အသက်ကြီးတော့ ကိုကို အမ်ဇက်လို့ဘဲ ခေါ်တော့မယ်နော် . . .
သူများကို စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တဲ့ ဆြာစေတန်ကြီး မင်္ဂလာဦးညမှာ ခေါင်းမထောင်နိုင်လောက်အောင်မူးနေပါစေဗျ :d ဒါမှမဟုတ် သူ့ကောင်မလေးနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်နေတုန်း ကောင်မလေးကို တခြားတစ်ယောက်က ခိုးပြေးပါစေ :d
ချစ်လို့ စသည် စိတ်မဆိုးရ စိတ်ဆိုးလျှင်လက်ဖက်ရည်တိုက်ပါ...
We also feel.. so sad.. :2: :2:
မော်မော်လုပ်ပြီး အဲဒီလို ပြောတာတော့ကောင်းဘူးနော်... မန်ဘာတွေအားလုံး စိတ်မကောင်းဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်..
ကဲ April Fool လဲ ပြီးသွားပြီဆိုတော့ အမှန်ကိုပြောလိုက်တော့မယ်....
မန်ဘာအားလုံးခင်ဗျား... This is just April Fool. Don't Believe This..
မယုံဘူးမပြောနဲ့နော်... မင်မင် တစ်ဖြစ်လဲ ဖောင်ဒါ ကိုစေတန့်ဆီက အတည်ပြုချက်ရပြီးပြီ...:D
မလိုလိုကတော့လေ... signature မှာပါတဲ့အတိုင်းကို ရေးတာပဲ..ကျွန်တော်တောင် ဖတ်ပြီး.. ခေါင်းကိုမူးသွားတာပဲ..:D
စေတန်ရဲ့ post မှာစာလုံးနီကြီးကို တွေ့ကတည်း နောက်နေတာမှန်းသိပါတယ်။
စပွန်စာတစ်ယောက်လောက်ထွက်တာနဲ့ ပွဲပျက်ရလောက်တဲ့ အဆင့်မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့လည်း
ဆင်ခြင်မိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘာမှဝင်မပြောဘဲ ကြည့်နေတာ။
ပြီးတော့ Admin တွေကြည့်ရတာ ပွဲမဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ့် ရုပ်တွေချည်းပဲ။
စပွန်စာ မရှိလည်း သူတို့ အိတ်စိုက် လုပ်ကြမှာ လေ။
ဒါ့ကြောင့် ပွဲ မပျက်ဘူးလို့ ကို ယုံကြည်တာ။
(တော်သေးတာပေါ့ ငါ Admin မဟုတ်လို့:D)
(အညာ မိတာ လူမသိအောင် ခပ်တည်တည်နဲ့ အရှက်ပြေပြောနေတာ.... )
တော်သေးတာပေါ့ ဖျားနေလို့ MZ ကို ၂ ရက်လောက် မ၀င်လိုက်တာ ဘာတွေများ ဖြစ်သွားလဲလို့
အစကတော့ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ရင်း အံသြ ထိန့်လန့် တုန်လှုပ် ၀မ်းနည်း (ဟီး ကျန်သေးလား.....) နောက်မှ အော် ဒီလိုလား လို့ ဟင် ချနိုင်တော့တယ်......ဟိုလိုလိုဒီလိုလို တော့ မသိဘူး :Oလုလုတော့ ခေါင်းကိုမူးသွားတာပဲ....တော်တော်နောက်တာပဲ April Fool :P